५० हजार कित्तासम्म भर्न पाइने गरि आइसक्यो फेरि नयाँ आईपीओ छुट्नुभयो की ! - सिधा मिडिया
५० हजार कित्तासम्म भर्न पाइने गरि आइसक्यो फेरि नयाँ आईपीओ छुट्नुभयो की !
९ असार २०७९, बिहीबार १८:४६ मा प्रकाशित
165 जनाले पढ़िसके
पिपुल्स पावर कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि भालि अर्थात असार ८ गतेदेखि आईपीओ जारी गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी ६३ करोड २६ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ६ लाख ३२ हजार ६०० कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
जसमध्ये इलाम जिल्ला इलाम नगरपालिका–१ र ४ अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि १ लाख ८९ हजार ७८० कित्ता र सो बाहेकको इलाम जिल्लाका बासिन्दाहरुका लागि ४ लाख ४२ हजार ८२० कित्ता सेयर छुट्याएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आवेदन छिटोमा असार २२ गते र ढिलोमा साउन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।